बच्चालाई पढ्ने बानीको विकास गराउने महत्वपुर्ण टिप्सहरु | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७६ आश्विन १२ गते ०५:०१
मेरो बच्चा पढ्दैन, राम्रो नम्बर ल्याउदैंन । के गर्ने ? आजभोलिका बच्चालाई साह्रै गार्‍हो, नसकिने । यस्तै कुरा सुन्छु आजभोलि । तर, दसैं विदामा यी कुराहरु गर्न बच्चालाई प्रेरित गर्नुहोला । उनीहरूको पढाइमा परिवर्तन अवस्य आउनेछ ।
मानिसको असली क्षमता भनेकै उसको सोचाई हो । उसको सोच्न सक्ने क्षमतालाई भरपुर सहयोग गर्न सक्ने हो भने उसले जस्तो मुस्किल काम पनि गर्न सक्छ । त्यसको लागि बुवा आमाले कुनै एक समय दिनैपर्छ । किनकि आफुले जन्म दिएको बच्चा कसरी मनाउन सकिन्छ, त्यो विषय प्रत्येक आमाबुवालाई थाहा हुनैपर्छ र थाहा हुन्छ पनि । बच्चाहरूले किन गर्न सकेका हुँदैनन् भन्ने कुरामा दुईवटा कारण छन्–
१) राम्रो बानीको विकास नएको कारण,
२) खानाको कारण ।
त्यसो भए के गर्ने ? कसरी गर्ने ?
बानीको विकास गर्नलाई यी कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ–
मलाई लाग्छ एक महिनाको लगातार कोसिस र समर्पणले बानीको विकास अवसश्य हुन्छ । त्यसको लागि एउटा खाली पाना, साईनपेन र डाईरी चाहिन्छ । सुरुमा खाली पानामा बच्चालाई के के गर्न मनपर्छ ती कुराहरुको सूची तयार पार्ने, उसको सूची लामो हुन सक्छ एक एक गर्दै टिप्ने, यो काम सकिएपछि उसलाई भविष्यमा के के गर्न मन लागेको छ, त्यसको सूची अर्को पानामा लेख्न लगाउने, भविष्यमा गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ अलि चुनौतिपूर्ण पनि हुन सक्छ ।
त्यसपछि डायरीमा दिनचर्या कसरी बिताउने भनि यिनै सूचीका आधारमा तयार पार्ने । डायरी बनाउदा भोलिको लागि आज बेलुका सात बजेतिर बसेर बनाउने अनि डायरीमा लेख्ने । डायरी बनाउदा बायाँमा समय लेख्ने दायाँमा कामको सूची (क्रियाकलाप) लेख्ने । तर एउटा कुराको ख्याल गर्ने एउटा क्रियाकलाप आधा घण्टा भन्दा बढि नगर्ने । किनकि आधा घण्टापछि बच्चा आलस्य मान्न थाल्छ । अनि अर्को क्रियाकलाप तिर लाग्ने । यसरी उ नसुतुन्जेलको कार्यको डायरी दुबै अभिभावक अनि बच्चा मिलेर बनाउने । अनि त्यही डायरी अनुसार काम गर्दै जाने । प्रत्येक चोटी फरकफरक क्रियाकलाप गर्ने ।
यदि यो काम नियमित गरेको खण्डमा उनीहरूको बानी बस्छ । यसरी गर्दा बच्चाको दिमाग तिखो हुन्छ भने पढाइलाई रमाइलो मान्छन । बच्चाहरुले पढाइमा रमाउन नसकेर नै राम्रो गर्न नसकेका त हुन् । यसरी एक महिना गर्न सकेको खण्डमा बच्चाको बानी बन्छ अनि पछि आफै गर्न थाल्छन् । यो भनेको मोटरसाईकल चलाको जस्तै त हो । सुरुमा कति गार्‍हो पछि जानेपछि छोड्न‌ मन लाग्दैन । यो एउटा अटोमेटिक सिकाई विधि पनि हो ।
अर्को कुरा बच्चाले आफै आफ्नो सिकाई विधि पत्ता लगाउदँछ । त्यसलाई प्रभावकारी सिकाई विधि भनिन्छ । वास्तवमा बच्चाले प्रगति गर्न नसक्नुको कारण नि यही आफ्नो प्रभावकारी सिकाई विधि थाहा नभएर नै हो । किनभने प्रत्येक मान्छेको आ–आफ्नै विधि हुन्छ । यो कुरा कसैले सिकाएर हुँदैन । हाम्रो सोचाई फरकफरक हुन्छन् । शिक्षक, अभिभावक, साथीले दिएको विधिले हुदैंन। ती सिकाई विधि अरुको हो अरुलाई नै काम गर्छ । आफ्नो कार्यक्रम आफै बनाउनुपर्छ । शिक्षक, अभिभावकले त मात्र वातावरण बनाउन सक्छन् । प्रभावकारी सिकाई विधि करोडौं छन् । आफूलाई कुन विधिले रमाइलो दिएको छ, पढ्दा आउंछ । त्यही विधि अपनाउने गर्नुपर्दछ । यसरी पढ्दा लेख्दा प्रगति गर्न सकिन्छ ।
बच्चाको भविष्य जस्तो ठूलो कुरा अरु केही छैन । अक्सर हामी अभिभावक, शिक्षक, ठूलाहरु हामीलाई मन परेको कुरा बच्चालाई दिन्छौं अनि बानी बगारिदिन्छौं । अनि हामीलाई लाग्छ माया गरेका हौ । बच्चाले चाहेको, खोजेको दिए पो माया गरेको हुन्छ । बच्चाले कहिले पनि मोबाईल, विद्युतीय सामाग्री त माग गरेको हुँदैन । त्यो त हामीले बानी पारिदिएका हौ । बच्चाको बानी चाहेर वा नचाहेर हामीले नै बिगारिदएका हुन्छौं अब सुधार्ने पनि हामीले नै हो । बच्चाले जहिले हर कुरालाई प्रयोग गर्न खोज्छ । यो कुरा गर्न दिनुपर्छ ।
अर्को कुरा भनेको खाना–
खानाले बच्चाको सोच्न सक्ने क्षमतामा ठूलो भूमिका खेल्छ । बच्चाको खानामा अक्सर प्रोटिनको कमी देखिन्छ । बढी मात्रामा मैदा भएको खाना खाएको देख्छु । यसले गहिरो असर गर्छ । एक महिनाको लागि मैदा कम भएको खाना र प्रोटिन ज्यादा भएको खाना दिएर हेर्नु आफै थाहा पाउनुहुन्छ ।
माथि उल्लेखित कुरा गर्नु भयो भने तपाईको बच्चामा परिवर्तन आउँछ । उसले नयाँ जीवन पाउनेछ । कृपया यी कुरामा विश्वास गर्नुहोस् । तपाईं र बच्चाको बिचमा विश्वासको कमी छ । आफ्नो बच्चाले गरेको, गर्न खोजेको कुरामा विश्वास गर्नुहोस् । परम्परावादी सिकाई नथोपारिदिनुहोस । आफूले जसरी पढेर आउनुभएको छ, त्यसरी नै पढ्न नलगाउनुहोस् । उसको दिमागलाई झ्याउ लाग्ने कार्यहरु नगराउनुहोस् । एक महिनाको समयमा गाली तथा उसको आत्मविश्वाससंग नखेल्नुहोला र अरुलाई पनि खेल्न नदिनुहोला । कृपया उसलाई नआउने कुरा नसोध्नुहोस् । आफनो बच्चालाई आउने कुरा सोधेर आत्माविश्वास बढाउनुहोस् । हामी सबै मिलेर बच्चाको उचित हुर्काइमा मद्दत गरौं । बाकी आफै गर्नेछन् ।
एउटा कुरा सोच्नुहोला बच्चा तपाई वा ठूलो मान्छे जसरी सोच्न सक्दैन । अहिले नै हामीले चाहेको जस्तो गर्न सक्दैनन् तर हामीले त उनीहरुको ठाँउमा बसेर सोच्न सक्छौं नि । हामी बच्चा बन्न सक्छौं तर उनीहरु ठूलो मान्छेको भावना बुझ्न सक्ने भने कदापि सक्दैनन् ।
माथि उल्लेख गरेका कुरा बच्चालाई गराउन सकेको खण्डमा बच्चाले धेरै राम्रो गर्न सक्छ । जीवनको उद्देश्य बनाउन सक्छ । यी टिप्स पालना गर्नु भयो भने तपाँईको बच्चामा परिवर्तन आउँछ । उसले नयाँ जीवन पाउनेछ ।